Emirates Airlines Emisebenti - Imisebenzi Ye-Global Airway - Layisha i-CV namuhla!
Emirates Airlines Imisebenzi - Layisha kabusha Qhubeka Namuhla!
Izindiza zezindiza zase-Emirates ezineziqondiso ze-Dubai City Company. Ngokuvamile, sibhala ngemisebenzi yomhlaba jikelele ye-Airways. Futhi njengoba uhlala ekhasini lethu. Kufanele uvakashele izigaba zethu zenkampani. Funda ulwazi lwethu lwemisebenzi. Futhi bheka ukuthi iqembu lethu lakwa-HR lingakusiza kanjani ukuthola umsebenzi namuhla. Yebo, umsebenzi uyaqhubeka ungasho ukuthi ngumkhakha wezindiza okhula ngokushesha. Nakanjani angakuqasha. Izinkampani ezihamba phambili ngemiklomelo yamazwe omhlaba engaphezu kwe-400 yokuphumelela. Futhi izinga labo lilukhuni impela ukulinyusa. Ngasohlangothini oluhle, iningi lefemu alizuzi lesi simo ngaphandle kokuthumela kwamazwe ngamazwe. Isibonelo abasebenzi basezingeni eliphezulu emhlabeni baseNdiya nasePakistan.
Ngesikhathi esebenza esikhumulweni sezindiza noma ngisho nasezindizeni. I Isisebenzi esisha sizofunda amakhono amasha amaningi. Futhi-ke, konke kuzobaluleka. Njalo ngonyaka, abaphathi bezindiza abasebenza e-Emirates. Ngokuqinisekile sigubha isikhathi sayo sokujoyina izinkampani. Ngoba selokhu ujoyine inkampani. Ngokuqinisekile umaka indlela yakho yokuphila. Akusebenzi nje. Ngoba yinqubo yesikhathi eside. Ukwenza isibonelo ikota yokuhlangana emhlabeni jikelele. Ngasohlangothini oluhle, impumelelo nokukhula okumangazayo. Ngokwesibonelo, I-Etihad ne-Qatar Airways ihamba ngokungafani. Ngakolunye uhlangothi, iqembu le-Emirates njalo ngonyaka. Ukunikeza imibiko ukuthi inzuzo eyengeziwe ye-yezigidi ezimbalwa. Futhi uqhubekela phambili, eminyakeni ezayo yezezimali.
Ukujoyina izinkampani ezihamba phambili zezindiza
Ingabe i-career enenhlangano yezindiza iwufanele ?. Indlela yabo eqinile njengomqashi womsebenzi we-Emirates iyakunxusa ?. Uma impendulo yakho inguyebo? Siyakwamukela iphrofayela yakho enkampanini yethu e-Dubai. Ngaphezu kwalokho, sikukhuthaza ukuthi ufunde kabanzi mayelana ne-Dubai City Company. Ngokuvamile kunamathuba amaningi emisebenzi okuthakazelisayo. Isibonelo, ungavakashela i-Emirates Group Careers Centre. Futhi I-Air Arabia imisebenzi yengxenye.
Ngakho sibheke phambili ekusizeni. Ngoba sisezingeni eliphakeme ezinkampanini ezizungezile. Ukusebenza kumafemu ezindiza. Uzodinga ukuba nenkampani evame ukukhuluma inikeza umsebenzi. Kunezinkampani ezimbalwa zama-Emirates eziqashisayo. Futhi ngalokhu engqondweni, ungajoyina amafemu amaningana. Kukhona uhlu lwezinkampani esizidalile. Futhi ukujoyina nabo kuyoba khona umqondo ohlakaniphile kakhulu ku-Job Seekers. Ngakho-ke uma uthola imisebenzi ezivela kumafayili e-Airlines ezizoba isiqalo esihle. Sinikeza le misebenzi e-UAE. Ngaphezu kwalokho, Indonesia, Kuwait ngisho naseSingapore. Uma nje usiza izinkampani ukuba zikhule futhi zithole imiphumela.
Qala nge-Jet Airways Careers basebenzi bomhlaba
Ukuqala imisebenzi ye-Emirates yezindiza. Ungakhohlwa udinga ukuba nesipiliyoni esiningi. Ikakhulu Okwezwe imisebenzi yomoya. Kanye naseMpumalanga Ephakathi nase-Asia. Ngakolunye uhlangothi, izinkampani zaseYurophu nase-US zinikeza ngokugcwele ukusekelwa nokuqeqeshwa. Sibheka abasebenzi bezemidlalo baseJet Airways Careers njengendlela esheshayo yokuthola umsebenzi. Okwamanje abanayo imisebenzi embalwa yokufaka isicelo. Abameli bethu bakwa-HR. Izindiza zezindiza zase-Emirates ezinebhizinisi leDaily City City. Thina kakhulu ukululeka ukuthi uqale umsebenzi we-Arline lapho.
Abasebenzi baseJet Airways Abasebenzi bomhlaba - Yiba isisebenzi ngalesi siqinile!
I-Best Companies ezinkampanini zezindiza zokusebenza
I-Air Arabia ne-Qatar, iSingapore ne-Etihad
Imisebenzi ye-Air India kanye ne-cabin crew - Abasebenzi bezindiza ze-Emirates
Layisha i-CV emisebenzini ye-FlyDubai ne-Kuwait Airways Careers. Ngaphezu kwalokho, i-Singapore Airlines nezinye izinhlangano eziningi zokuqesha. Ngokuvamile, i-HR yethu iqinile ukukusiza. Futhi uthole amathuba emisebenzi emangalisayo esifundeni seGulf noma eMpumalanga Ephakathi. Sinezithuba eziningi zezisebenzi zomhlaba wonke kanye nabaphathi abakhulu. Kanye ne ukuhlinzeka ngezinsiza zokusesha umsebenzi abantu baseNdiya nasePakistan. Ehlangothini elihle ngisho nakuQatari futhi Abasebenzi baseSaudi Arabia bahlasela ithimba lethu lokuphatha. Ngakho-ke, sicela uthumele ukuqhubeka kabusha kwenkampani yethu noma ukuqasha izinkampani ezingezansi bese ulindele imisebenzi emangalisayo ezoza futhi qala ukuphila iphupho lezindiza. Emirates indiza imisebenzi nge Dubai City Inkampani ilinde wena!.
Faka i-CV emisebenzini yeFlyDubai naku-Kuwait Airways Careers. Silapha sikusize uthole ithuba lemisebenzi emangalisayo eMiddle East. Izisebenzi zezindiza zase-Emirates zinezinkampani zaseDubai City Company manje seziqala izingxoxo zokuhamba ngezinyawo. Sithola izikhala eziningi zabafuna imisebenzi bamazwe omhlaba. Kanye nabantu abavela eNdiya nasePakistan ngisho naseQatar. Thumela ukubuyela enkampanini yethu noma ezinkampanini ezingezansi.
Dubai City Company & Uhlu lwezinkampani zokusebenza!
Izindiza ezihamba phambili emhlabeni wonke ukusebenza!
Enye yezinhlangano ezinhle kakhulu ezisebenza emhlabeni. Ukusebenzela izinkampani zakwa-Airlane. Ngasohlangothini olubi, azikho izindiza ezimbi kakhulu emhlabeni. Ngoba sibasebenzisa ngaso sonke isikhathi. Ngakho-ke, umaki uhlala uhamba. Unalokhu engqondweni, inkampani yethu iveziwe izinkampani zezindiza ukuthi zisebenze. Futhi yini isinxephezelo noma iholo futhi lapho ungathola khona izingxoxo zokuhamba. Ngokuvamile, abanye babo bangabazweli abafuna imisebenzi. Izinkampani eziningi ukuqasha eMiddle East.
Ngakho-ke, yini ongayenza nalesi sigaba. Ukuqashwa kwenkampani yonyaka wesithupha kudinga izingcezu zolwazi. Hamba ulwazi oluyisisekelo mayelana nemisebenzi yemboni yezindiza. Ngaphezu kwalokho, ngokusekelwe kwekhwalithi yesevisi. Umuntu angabheka ukuthi kufanelekile ukuthola umsebenzi kwinkampani ekhonjiwe. Ngakolunye uhlangothi, ungabona ukusebenza okusemsebenzini. Futhi lapho ungafaka khona ngisho nesebenzi basePhilippines. Ngaphezu kwalokho, cabanga ukuqhutshwa kwemisebenzi evela phesheya. Futhi ukuze uhlole ukuthi yini edingekayo ukuze usebenze kumaphuzu jikelele. Nale nkampani yabasebenzi bezindiza ze-Emirates. Yisipho kuphela kuwe baqashe abasebenzi baseRussia.
Izindiza zezindiza eziphezulu kakhulu zifakazela ukuthi imisebenzi enhle kakhulu inikeza. Futhi ngalokhu engqondweni, sikhuluma ngemholo. Ngaphezu kwalokho, Isevisi yamakhasimende iyinhloko esemqoka yale misebenzi. Ngakho-ke, akudingeki ukuthi unikeze i-CV ephathekayo ukuze ithole kahle. Konke okudingeka ukwenze nje uchofoze esithombeni. Bese ugoqa phansi ukuze ubone i-Qatar, i-Kuwait neSingapore ne-UAE. Izindiza ezihamba phambili emhlabeni wonke ukusebenzela abasebenzi base-Emirates izindiza. Futhi sibheke ngokulula ukuhamba nge-oda ngomsebenzi wabo wokubekwa komsebenzi jikelele.
Imisebenzi engcono kakhulu ye-Airways emhlabeni wonke!
Ngezansi unesinqamuleli sezinkampani kufanele uthumele i-CV yakho. Futhi unalokhu engqondweni, skrolela phansi futhi uzobona izincazelo eziningi. Ngakho-ke, umsebenzi wezindiza we-Emirates uma zikulungele. Ungaziphatha ohlelweni olusheshayo lwe-inthanethi. Ngiyethemba uzokwazi uthole imiphumela emihle e-Emirates izindiza zezindiza ezine-Dubai City Company. Chofoza ngezansi ngegama lenkampani nokuxhumanisa kwesicelo.
Gulf air imisebenzi
Imisebenzi yaseBrithani Airways
Umsebenzi we-Air Arabia
Imisebenzi ye-Air India
Abasebenzi be-Etihad Airways
Hamba imisebenzi ye-Air
I-Jet Airways Careers
Umsebenzi we-Qatar Airways
Izindiza zeSingapore zisebenza
Kungani kufanelekile ukufaka isicelo se-Emirates Airlines Careers?
Lezi zinsuku, abaningi abafuna umsebenzi. Ukubuka ngemisebenzi ephezulu yokukhokha. Futhi yizinkampani ezinkulu kuphela ezihlinzeka lokho. Amathuba aphezulu we-10 Emirates Airlines Careers. Zingaphezu kwe- $ 150,000 ngonyaka. Inkampani iDubai City Inkampani iqasha nabo abaphathi. Ngaphezu kwalokho, Silapha ukukusiza. Empeleni, i-Emirates iza ngaphezulu futhi indiza ne-Dubai. Iqembu lethu libheke ngabomvu ukukusiza ukukusiza ukuba ube yisisebenzi sabo. Ngoba ebhizinisini labo ukuthola abantu abaningi ngangokunokwenzeka. Sengisho nje, ukuthola imisebenzi emangalisayo kuthatha isikhathi. Emisebenzini engaphezu kwe-80% yemisebenzi yama-Airlines. Uzodinga ukufunda amakhono amaningi. Enye yezibonelo ngamakhono enkonzo yamakhasimende nabaphathi bezezimali. Kanye nabasebenzi. Ngakho-ke amakhulu ezinkampani ezingaba khona ongakuqasha uzodinga ukukuqeqesha.
Kodwa sizokhetha kuphela ukukhetha ezimbalwa zazo. Ngoba siyazi ukuthi uma uzohamba ne-20 ephezulu noma i-30 yazo. Futhi ngaleyo ndlela indlela yakho ithuba lokuthola umsebenzi e-Dubai liyokhula. Futhi njengoba sibeka izinkampani ezinhle kunazo zonke. Akukho ukushaqeka ukuthi okungcono kakhulu kusekelwe eMpumalanga Ephakathi. Yiqiniso eQatar Saudi Arabia e-United States futhi. Izindiza ze-Emirates imisebenzi ephethe i-Dubai City Company iyoba yinto yakho enkulu.
Indlela yokuphila kanye nezinga lemisebenzi
Njengomsebenzi ongaba khona kulolu hlobo lwezinkampani. Ungakha imali enkulu bese uqala impilo emangalisayo. Okongeziweyo izokhula nakanjani futhi izindleko zokuphila ziyoncipha. Kunzima ukusho ukuthi yiziphi izinkampani ezinhle. Ngoba bonke bahlinzeka ngezinsizakalo ezinhle kumakhasimende abo. Kanye nezinga labasebenzi kanye nezinga lokuphatha lesiko lokuzibandakanya. Ngakho-ke ake siqale emisebenzini eyisisekelo.
Dubai City Inkampani in a kakhulu ukusika okuncane kwabasebenzi. Ikubonisa amazinga aphezulu webhizinisi lama-Airlines. Ukusuka kwindlela entsha eya kumtshalizimali webhizinisi. Konke lokho kufuna abafuna umsebenzi. Izinga nje laleli bhizinisi lihlukile. Bheka ngezansi ngezigaba ezahlukahlukene. Okwakho unethemba lokuthi uzokwazi thola kancane kancane ngalolu hlobo lwebhizinisi.
ImiSebenzi yase-Basic Emirates Airline
Ungamangala. Cishe uhola malini ngenkathi usebenza emisebenzini yezinga lokungenela. Ikakhulu nge-Airline imisebenzi yezimoto. Ngakho-ke, ukukhuluma okuningi, izikhala zemisebenzi eziyisisekelo ongazithola kwi-Dubai City emangalisayo. Ingabe ukuhlanza imisebenzi, ukugcinwa kwezindlu kanye nokusebenza kwamakhasimende. Futhi silinde amakhasimende abathengisi bezindaba. Eqinisweni, abasebenzi basezinsizakalo eziyisisekelo bamakhasimende kuhle ukuhamba. Ngakolunye uhlangothi, sikudlulisela amehlo ngendlela encane kangcono. Yimisebenzi ngamathikithi athengisa kanye nesisebenzi somsebenzi jikelele. Njengezindiza ezithengisayo amahhovisi kanye nokuphathwa kwehhovisi.
Isibonelo, ungathola wena futhi uqale ukuthengisa amasevisi online. Uhlangothi oluhle kuphela kwi-intanethi liye landa. Ngakho, uzothola indawo enhle nenhle ukusebenza. Ngakho ake sicabange ukuthi ungasebenza ehhovisi. Futhi esikhathini eside, ungaba yilungu elisha lomsebenzi. Isibonelo, qala ukuhlela amasevisi ayisisekelo kakhulu. Kuhle kakhulu amathuba emisebenzi ezingeni lokungena Imisebenzi iqashe izimoto. Ngoba manje sezindiza izinkampani ezisebenza namanye amafemu eTurkey.
Imisebenzi yezinga lokungenela ngaphakathi kwe-Industry
Kunezinsizakalo ezingaphezu kwekhulu kulowo nalowo izinkampani ongazenza. Enye yezibonelo zalokho okukhonza abanye abadala kumathuba amaningi kunomsebenzi wemisebenzi. Kulula nje ngoba kunzima ukwenza lokho akuwona wonke umuntu ozokusebenzisa ngokunenzuzo. Ukuhlanza amatafula nokukhipha udoti. Noma uphinde upholisise phansi. Yilokho imisebenzi ongayilindela izinga lokungena. Vele, uma unemfundo emangalisayo ungaqala njengomphathi wokuqeqesha. Futhi unalokhu engqondweni, iholo lakho lizokhula kancane. Kepha uzokwazi ukukhokhela into enhle kakhulu. Ikakhulu ngemali ekhokhelwa eDubai edolobheni e-Abu Dhabi. Emirates imisebenzi yezindiza enenkampani Dubai City Company nakanjani kufanele.
Imisebenzi ye-Middle Management Airlines
Izinga elilandelayo ngemuva kweleveli eyisisekelo amathuba okuphatha. Futhi kulolu hlobo lwemisebenzi, uyisimo esilungile. Kepha uyakudinga ukukhula imisebenzi e Dubai. Ngenxa yezinkampani zezindiza. Ngizokhula futhi ngilindele ukukhula esikhathini esizayo. Ngakho-ke bayokunika lesi sikhundla se-4 eminyakeni engama-10. Futhi ikusize uphumelele. Noma yisiphi isici ozodinga ukusiza amakhasimende. Ngoba uzoba phakathi kokungena kwezinga kanye nokuphathwa okuphezulu kanjalo. Ngidinga ukubika kumabhodi wabaqondisi. Kanye nabaphathi bezabasebenzi, abaphathi bezentengiso, abaqondisi bokusebenza. Bonke labo bantu bazohlola imisebenzi yakho. Futhi kukusiza wagijima usuku lonke. Ngokwesinye isandla, abantu abangaphansi kokugadiwe kwakho babeqonde. Kuzodinga ukuphathwa nguwe. Ngakho-ke isikhathi eside siyashintsha.
Abaphathi ku-Airlines Industries
Ngakho ake sicabange ukuthi uzosebenza amahora we-8. Omunye ababili owathathayo emoyeni wenkampani yenethiwekhi uzoba nomvuzo. Ngaphezu kwe-80% yabaphathi ku-Airlines Industries. Ukufinyelela izikhundla zomqondisi-level phakathi neminyaka ye-10. Ngoba iningi lezinkampani ziyaziqhenya ngalokho. Lo mqondisi omusha uqala ezingeni lokungena. Abaningana babo baveza ngisho nezikhangiso. Ukuthi i-vice-mongameli wabo. Qala njengomsizi wezokwelapha kule nkampani. Ngakho kungakhathaliseki ukuthi yikuphi ukuzibonakalisa. Futhi kukhona kungakhathaliseki ukuthi uvelaphi ngisho nasePakistan. Ngaphezu kwalokho, iNingizimu Afrika noma I-Saudi Arabia. Noma ngisho iPhilippines bonke abantu abanethuba ne-Airline izimboni zemisebenzi
Izinga eliphezulu lezinkampani zokuphatha
Izinkampani eziningi emhlabeni jikelele. Empeleni inikeza indawo yokuhlala ngenxa yesisebenzi sabo. Amathikithi ahamba ngezinyawo ekhaya lawo uma engabokufika. Imfundo yezingane. Futhi amazing wena ukudlulisela impilo Ukuba. Ngaphezu kwalokho, ukukuthola mayelana nalokhu kuzonikeza i-laptop nezemidlalo yemoto. Ngakho, imisebenzi yezindiza ihamba kahle futhi iyafaneleka ukulinda. Uma u buyisele wena nge-BMW. Noma nge-900. Futhi usayizi ophakathi wasekhaya ophethe ukubhukuda. Kumele kushiwo, lowo muntu uyalazi ibhizinisi. Ngakolunye uhlangothi, uma uthanda ngisho ukuthuthuka okuphakeme. Okwe-CEO noma kukhona ngisho nezinga eliphakeme kunalelo. Izinga labatshalizimali. Futhi kunendawo lapho empeleni abantu bendiza izindiza. Abaphathi bezimoto ezihamba nge-VIP bashayelwa ngisho nokuba ne-helikopta eyakhe.
Imisebenzi yezindiza zezindiza kanye nabaphathi
Ngakho-ke, uma ufuna umsebenzi nedamu elikhulu lokubhukuda. Futhi indlela yokuphila emangalisayo njengezigidi. Ungakwazi njalo thola lokho ku-Dubai Company. Kuneziningana abantu bezinye izizwe abathola umsebenzi emhlabeni wonke. Futhi kushiya izinga eliphakeme kakhulu lempilo. Unalokhu engqondweni, sikhuluma ngamaNdiya nasePakistan. Ngakho-ke uma uvela kuleli. Kufanele nakanjani uthole umsebenzi wokuphatha omkhulu. Ngoba ngakolunye uhlangothi, uma ufuna izindlela ezingcono zokukhula. Ungaba ngisho nomshayeli. Kukhona elinye izinga lemisebenzi ephezulu yokuphatha embonini yezindiza. Ngokuphezulu izikhundla zemisebenzi ekhokhelwayo emhlabeni jikelele. Isibonelo, umshayeli omkhulu owenza amathani emali. Noma imenenja yokusebenza kanye nomphathi wesifunda. Ingabe bobabili benza imali enhle eMpumalanga Ephakathi ?. Lokho, yiqiniso, kuvumela ukuba baqhube imoto enhle.
Umtshali wezebhizinisi kanye nabanikazi bezindiza
Kulesi sigaba imali eningi kakhulu. Iningi labatshali bebhizinisi kanye nabanikazi bemboni ye-Airline abayizigidigidi. Futhi-ke, kunkulu ubuzwe obuhlukile. Abantu abaningi baseMelika kanye nabaseCanada. Ngaphezu kwalokho, ama-Arabhu aqhamuka e-United Arab Emirates. Ngabatshalizimali baseMiddle East bebonke. Ukuphatha lolu hlobo lwebhizinisi. Ngisho nokuphakama Kwakhe uSheikh Mohammed bin Rashid enengxenye yalokho. Futhi Yebo imali eningi ku lolu hlobo lwebhizinisi. Ngenxa yokuvezwa kwayo kwebhizinisi laphesheya. Wonke umuntu uyazi futhi wenza imali. Isibalo sabantu ukusebenza lapho imininingwane ehlukaniswe. Futhi asazi nokuthi leli bhizinisi lenza malini. Amaphesenti kuphela abantu abasebenzela uhulumeni abakwaziyo lokho ngendlela efanele.
Ama-Airlines enza imali yebhizinisi
Ngakho nje ukuba ube ngumtshali wezebhizinisi kulolu hlobo lwebhizinisi. Kuzodingeka ube namabhizinisi ahlukene esikhathini esidlule. Abantu abaningi abazi ngisho nomuntu siqu. Futhi ngokuqinisekile kungakanani lokhu abantu benza. Iphesenti labantu kuphela elibiza uhulumeni wazi ukuthi lokhu kusebenza kanjani. Ngakho, nje ukuba ube ngumtshali-zimali webhizinisi ngohlobo lwebhizinisi. Ngokuqinisekile, kuzodingeka ube namabhizinisi ahlukene esikhathini esidlule. Ngenxa yesakhiwo sokutshala izimali. Futhi-ke, sebenze ngale ndlela yokuphatha. Udinga ulwazi oluningi. Kepha udinga ukuqinisekisa uhulumeni kanye neziqu kanye nabanye abatshalizimali abazimele lokho ungumuntu ofanele.
Imisebenzi ye-1 Emirates Group
Iqembu le-Emirates ukuqasha abafuna imisebenzi. Yebo, kuze kube manje le nkampani iyinkampani enkulu kunazo zonke. Futhi unalokhu engqondweni, kuzofanela ukuthola isipho somsebenzi. I-Emirates yiqembu lezinkampani. Ngakho-ke, inqobo nje uma ufaka isicelo ngasikhathi sinye. Uzoba nayo isicelo sakho nezinkampani ezimbalwa. Ngokuhamba kwesikhathi, kuzodingeka. Lokhu kukhulunywa ngokuqinile yinkampani engcono kakhulu e-United Arab Emirates. Isikhathi oqale ngalo nale nkampani. Uzozizwa amandla e-Dubai nase-Abu Dhabi ithonya ebhizinisini.
Imisebenzi ye-2 FlyDubai
Fly Dubai nakanjani futhi omunye wenhlangano ethuthukayo. Nge-flydubai ungakhuluma ubhalisele izexwayiso zomsebenzi. Kanye nokwengeza imininingwane yakho. Ngaphezu kwalokho, bhalisa i-CV yakho. Futhi ubheke ngisho nezinzuzo namasiko. Ngakho-ke ukukhuluma ngokujwayelekile uma ufuna ukwesekwa kosizo. Abasebenzi bezindiza ze-Emirates abane-Dubai City Company yinto ehlakaniphile. Ngokuqinisekile, le nkampani ifuna ukukusiza. Ngaphezu kwalokho, futhi kufanele ulayishe kabusha impendulo yakho ebuyekeziwe lapho. Futhi usethe ezinye izaziso zomsebenzi. Ngoba le nkampani izokubeka ekugcineni.
Imisebenzi ye-3 Air Arabia
I-Air Arabia inikeza imisebenzi enentshisekelo. I imisebenzi enikezwa yinkampani yizinhlinzeko zemisebenzi emhlabeni jikelele. Ngenkathi uthola intshisekelo yakho ekunikezelweni komsebenzi. Ngokuvamile, inkampani yase-Air Arabia izokuqasha. Ngaphezu kwalokho, abaphathi benkampani yakwa-HR bakufisela okuhle kodwa ekufuneni umsebenzi. Ukuze uqale ngabo kudingeka uchofoze ukufaka isicelo. Ngemuva kwalokho wakhetha noma yisiphi isikhundla. Ngemuva kwalokho, ekugcineni, ungachofoza inkinobho ethi Faka manje. Ungaba nomsebenzi we-switch shift. Kanye nabaphathi bezentengiselwano eSaudi Arabia nonjiniyela isikhundla eTurkey. EMpumalanga Ephakathi noma eYurophu. I-Emirates izindiza ze-ccareer ne-Air Abarbia inkampani. Kuyoba nomqondo omuhle ngempela.
Abasebenzi bezindiza ze-Emirates - imisebenzi ye-Air Arabia
Imisebenzi ye-4 Air India nemisebenzi
I-Air Arabia inikeza imisebenzi enentshisekelo. Imisebenzi eyenziwa yinkampani yizinhlinzeko zemisebenzi emhlabeni jikelele. Ngesikhathi wena thola isithakazelo sakho ekunikezeni imisebenzi. Ngokuvamile, inkampani i-Air Arabia eqasha abasebenzi abasha. Vele naku-United Arab Emirates. Emirates imisebenzi yezindiza nge-Dubai City Company kuyinhlangano ehlakaniphile. Okwamanje udinga ukulanda amafayela. Ngaphezu kwalokho, hlola izingcezu zolwazi mayelana nokunikezwa komsebenzi othile. Bese ufaka isicelo sale nkampani.
Imisebenzi yama-Air kanye ne-Careers ye-5
Inkampani yeWizz Air iqasha futhi abasebenzela izindiza ze-Emirates. Ngokuvamile, banikeza izinhlobo ezintathu zemisebenzi. Okokuqala ithuba lomsebenzi ongathola ngisho nasePoland. Ingabe i-cabin yakha amathuba emisebenzi. Ngakolunye uhlangothi, uzoba nemisebenzi yehhovisi. Futhi lokho kuzoba njalo ukusebenza kwemithombo yabantu, umnyango wezentengiso. Ngokuqinisekile ngalolu hlobo lwemisebenzi ezimeni eziningi, uzosebenza ngamaphepha namakhompyutha. Futhi inketho yesithathu ngeWizz Air ukuba umshayeli wendiza. Ngokuvamile, lokhu kungenye yezinkampani ezinhle kakhulu. Ngoba abashayeli bezindiza babo bendiza bevela emadolobheni abo. Futhi-ke, inkampani ihlinzeka ukwesekelwa okugcwele nokuqeqeshwa ngemvelo yezomthetho. Ngakho-ke inkampani yedolobha laseDubai yeluleka ukuthi ufake isicelo sale nkampani. Iqembu lethu likholelwa ngokuqinile ukuthi kuzokufanele yonke imizuzu nale nkampani. Emirates indiza imisebenzi nge Umsebenzi we-WizAir iwebhusayithi kuyoba kuhle ukuqala.
I-NO6 yase-British Airways Careers
Enye inkampani yabasebenzi bezindiza ze-Emirates. Lesi sikhathi ne-United Kingdom Company. I-British Airways iyinkampani enkulu, eqasha eLondon, e-Dubai naseNew York City. Ngakho, ngifuna inkampani enhle yindlela yokusebenza kubo. Le nkampani, evame ukukhuluma, iqasha e-Heathrow Airport. Ibhizinisi laseBrithani linamandla okwenza izinto ezingalibaleki ngamakhasimende. Uma iphrofayili yakho izohambisana nezidingo zabo. Nomaphi lapho besebenza khona, phansi noma emoyeni. Ungaba ithuba elihle nabo. Ukuthi unolwazi noma ungumuntu osanda kuthweswa iziqu. Noma mhlawumbe usaqala umsebenzi e-UK kufanele uzame umsebenzi wakho waseBrithani Wezindiza.
I-NO7 Etihad Career Airways
Ngakho-ke kusukela emisebenzini ye-cabin crew kuze kube semasu kanye nemisebenzi yokuhlela kanye nemisebenzi yokuphatha umqhubi uyabandakanya futhi abathwali bezohwebo benza le nkampani ngokuqinisekile izohlinzeka ngamathuba amahle kakhulu okukhula ne-United Arab Emirates. Kuzosebenza kahle kakhulu e-Dubai nase-Abu Dhabi. Futhi-ke, ibhizinisi lisekelwe esikhungweni sebhizinisi lokungenisa izihambi phakathi kweMpumalanga Ephakathi. Uma unesithakazelo ngokukhonza abantu. Le nkampani ngokuqinisekile ingenye yezindawo ezinhle kakhulu zeqembu labasebenzi. Ungathola umsebenzi njengomqhubi noma i-SFI amathuba emisebenzi.
Imisebenzi ye-Airline ye-8 eNorway
IsiNorway kukhona enye ukuqina okuhle ukusebenza. Ngoba le nhlangano inenye yezindiza ezindiza ezintsha emhlabeni. Ngaphezu kwalokho, ngaphezulu kwezindiza ezintsha ze-260 kuyalwa. Ngakho-ke, ngokusekelwe kuleso sibalo. Kuzofanela thintana nabamele abaphathi bakwa-HR. INorway Air izophatha isicelo sokuvulelwa kwamakhulu amaningi avulekileyo enkampanini kungekudala. Lokhu kusho ukuthi inkampani idinga abantu abaningi ukuthi bajoyine eyabo Umndeni waseNorway. Futhi-ke, uma ungomunye wazo. Qhubeka ubhalise imininingwane yakho Abasebenzi bezindiza ze-Emirates ne-Dubai City Company.
Ngakho-ke lesi sikhathi esibukezayo siyahamba inkampani yaseNdiya. Le nkampani i inkampani enhle kakhulu eNdiya igama layo liya ku-Airlines India Limited. Kungenxa yocwaningo lwamaqembu amaNdiya futhi umsebenzi wawo ukuhlinzeka ngezinto zokuhamba eziphephile nezisebenza kahle. Yabo bonke abasebenzi kanye namakhasimende abo. Kanye nesikhathi sonke ukunaka imisebenzi ehlobene nayo futhi isebenza namakhasimende abo. Futhi bayakwazi ukwakha isevisi eyingqayizivele. Ngokuvamile, kubantu abahlukene kanye nabaqashi babo bezinkampani.
Enye inkampani ukuthi ifilimu yethu ibukeza lokhu yi-KLM inkampani empeleni iqasha abakhi kanye nabasebenzi bomhlaba kanye nabantu abanolwazi oluhle ekukhangiseni. Ungasetha zonke izindlela zokuxwayisa umsebenzi ngokujwayelekile futhi ungathola imisebenzi ezindaweni eziningana. Kanye ne-USA Yurophu Canada futhi, Yebo, siyasho. Sincoma ngokuqinile ukuzama ukuthola umsebenzi. Kungenzeka kube Kunzima kakhulu ukukwenza ukuthole eNdiya nasePakistan. Kepha kuzoba lula kakhulu ukuthole eDubai naseNingizimu Afrika kanye nabasebenzi bamazwe omhlaba. Uzothola umsebenzi futhi kuzokhokhwa iholo elihle.
Manje yisikhathi seVirgin Atlantic inkampani enhle kunazo zonke kule nkampani ukuhlinzeka ngamathuba amaningi ngoba kusuka kumakhasimende ngokwesibonelo kusukela ezinsizeni zezindiza kuya esikhungweni senkonzo yamakhasimende. Ungathola nabo wonke amathuba amakhulu abanayo. Ungakwazi njalo uthole umsebenzi ehhovisi eliyinhloko. Futhi kusuka endaweni yokuphatha, ungabuyekeza lokhu iqinile futhi uzosebenza futhi ngemuva kwezigcawu ngakho-ke uma ungumuntu onethalente unezindima ezihlukahlukene. Ngakolunye uhlangothi, sinezimpahla ezivela kuma-supercars ukuze singabi naso isipiliyoni sokushayela futhi uzokwenza. Nokusebenza kwe-Engineering okuzoba khona kanye nezifundo.
Ngokolunye uhlangothi, uzoba nesikhundla sokuhola. nale nkampani, uzobe uhola futhi uvuza abantu abazithuthukisayo. Futhi-ke sinobunjiniyela nokusebenza. Futhi, ukuze uthole lo msebenzi kahle. Uzodinga ukuba ne-degree degree. Futhi imisebenzi eminingi izobanjelwa eLondon. Futhi-ke sinabaqhubi bezindiza kanye nabantu abahambayo. Isibonelo, fly ezindizeni ezivuselelwe kakhulu.
Amathuba angama-career we-12 Jet Airways
Emirates indiza imisebenzi nge Jet Airways. Well, Jet Airways kuyinto ukundiza emhlabeni wonke. Ungathola eziningana ze-Arkansas nale nkampani. Futhi kunamathuba amaningi. Isibonelo, ungathola umphathi wokusebenza kwendiza, ngaphansi kwamathuba emisebenzi. Kanye nesiphathimandla sokuqala. Ukushayela izindiza ngakolunye uhlangothi sinakho ukuphathwa kwezimali ukuphathwa kwemisebenzi ngaphakathi kwenkampani. Ngakolunye uhlangothi, ungathola ngisho nemisebenzi yokwelapha. Kanye nokusebenza kwamakhasimende.
Ngakho-ke masibhekane nazo zonke imisebenzi inkampani ezokwenza. Kufanelekile ukuthola. Ngoba ngisho noma uthola isikhundla esiphakeme. I-Jet Airways inkampani enkulu kangaka. Ukuthi bazokunikeza amathuba amaningi. Ngaphezu kwalokho, ungaziqeqesha. Futhi ube abaphathi abangochwepheshe. Ngakho-ke, inkampani yedolobha laseDubai esiza expats. Ukuze uthole nabo chofoza esithombeni esingezansi. Sengisho nje, le nkampani ilungele imisebenzi eMumbai. Ngakho-ke uma ungusomabhizinisi waseNdiya. Kufanele nakanjani uthumele i-CV kule nkampani.
No.13 I-Kuwait Airways Imisebenzi
Izindiza zezindiza zase-Emirates ezinezinsizakalo ze-Kuwait Airways. Enye inkampani engathanda ukuyibuyekeza. Ingabe i-Kuwait Airways. Ngoba lapho unga khona hlola isiko lenkampani. Ngaphezu kwalokho, inkampani inikeza eziningi zesikhala. Isibonelo, izithuba ezijwayelekile zabasebenzi bamazwe ngamazwe. Ngakho-ke woza uma ufuna ukuba ngumshayeli wezinyawo ungaqala nale nkampani. Ngakolunye uhlangothi, uma uthanda ukuthola amathuba emisebenzi yezezimali noma ngisho Ubuchwepheshe bezinkampani zezezimali izikhundla uyakwazi ukuthola umsebenzi kubo. Futhi ekugcineni sinakho imisebenzi yemisebenzi yabantu kanye nokusebenza. empeleni, le nkampani iqasha ngisho isikhundla sabaphathi abaphezulu. Inkampani yedolobha laseDubai nakanjani ishayela abafuna umsebenzi kule webhusayithi. Ngoba sonke siyayazi imisebenzi esingayinikeza. Uyakwazi ukuzilawula futhi wenze imali enhle.
Enye inkampani esithanda ukwethula kuwe yi-air Malta. Le nkampani, ngokuvamile ikhuluma, iqasha ezweni elincane eYurophu. Kepha inhlangano enkulu. Futhi ngokuvamile ukukhuluma okuhle kakhulu ngasiphi isikhathi. Ngakho-ke, uma ungathanda ukuthola inkampani futhi indawo entsha yokusebenza. Zama i-Air Malta inhlangano. Ake sicabange ukuthi uthanda iYurophu futhi ukusebenzela wena eMalta. Impela kukunikeza isiqalo esihle. Inkampani yedolobha laseDubai ibheke phambili njalo. Ukusiza abafuna umsebenzi futhi siyaziqhenya kakhulu ngomuntu ngamunye. Yini ubhalisela inkampani yethu ?. Noma kunoma iyiphi i-Emirates Airlines Careers.
Imisebenzi ye-15 e-Qantas
Umsebenzi we-Qantas Airlines. Enye inkampani enhle kakhulu yokusebenzela. Futhi hhayi kuphela i-Emirates Airlines Careers. Kungcono kubasebenzi, kunezinkampani eziningi eziningi. Ngalokhu engqondweni, abafuna umsebenzi bafuna ukuba yingxenye yeQantas team. Kodwa lokho akulula, ezimweni eziningi kudinga ukuba ilungu elisha liphakamise amazinga. Bese ukuhambisa ezinselele ezahlukene. Le nkampani izosebenza endaweni enzima kakhulu. Abaningi bamncintisana abasebenza ezimakethe ze-Airlane. Yingakho i-Qantas ngokuvamile ilindeleke kakhulu kubasebenzi bayo. Empeleni, abaphathi balindele ukufezekisa okungenakwenzeka. Ngakolunye uhlangothi, inkampani ihlale isekela abaphathi beqembu labo. Ukuqeqesha nokufundisa ukuthi ubuholi obuhle bubukeka kanjani. Ngaphezu kwalokho, ukuthi ungamethemba kanjani futhi ululeke abanye ngenhlonipho. Bheka lapha ngezansi.
I-Aegean corporation, enye inkampani ye-Emirates Airlines Careers. Ngokuvamile, le nkampani isebenza kusukela ezingeni eliphezulu kakhulu. Umsebenzi wabo ukunciphisa ibanga phakathi kwamakhasimende kanye nesisebenzi sabo. Bathi efuna ukukusondeza kulokho ofuna ukukuthola. Ngakolunye uhlangothi, bekunenqwaba yabahambi nezigigaba futhi bezama ukubanikeza ngokuqhubekayo izinsiza ezisezingeni eliphakeme kakhulu. Umqondo ophambili ukuhlonipha nokuthuthuka ungene emakethe. Kanye nokuvela abasebenzi babo futhi ukusiza ukuxhasa abalingani babo phakathi kwemiphakathi yasendaweni.
Kukhona abagibeli abangaphezu kwezigidi ezingama-12 kusukela ku-2012. Ukundiza ngezindawo ezifika e-145 kanye benza imali engaphezu kwe-1 billion Revenue. Emazweni we-45. Ngaphezu kwalokho i-89% yenhlangano nokusiza ngendawo ephephile. Le nkampani ingumlingani weStar Alliance futhi babeka imali eningi Ukutshalwa Kwezimali. Ngakho-ke izikhundla zakho zizotholakala kungekudala. Futhi ngokuza kwabasebenzi lokho kungaba ithuba elikhulu lokukhula.
Imisebenzi ye-17 e-Austrian Airlines
Ama-Airlines e-Australia nawo angabadlali abaphambili emakethe. Okwamanje inkampani eqasha izinkambu ezimbalwa zomsebenzi. Unalokhu engqondweni, lokho kuyindiza kanye nomenzeli wesevisi yabagibeli, umshayeli wezindiza, imisebenzi yezobuchwepheshe, ihhovisi elikhulu kanye ne-internship. Ngokwesinye isandla, inkampani inikeza amathiphu amaningi kanye nemihlahlandlela ukuthi ungasebenzisa i-Emirates Airlines Careers. Esinye sezibonelo i-Austrian Airlines inayo ibhulogi emangalisayo. Empeleni babhala ngeqembu labo mayelana neFleet yabo futhi mayelana nomshayeli wabo namasevisi. Yiqiniso, kubheka okumangalisayo futhi ngokuqinisekile abantu abaningi bangathola inani kusuka kulolo bhulogi. Ngakho-ke kancani futhi uchofoze esithombeni ukuthi kuzokuthatha ekhasini lakho. Ngokuqinisekile qhubeka phambili futhi ufake isicelo bese uzama ukuthola umsebenzi.
Imisebenzi ye-18 e-South African Airways
Ukuthola umsebenzi akulula kangako. Enye inkampani esithanda ukuyibukeza kule ndatshana. Izindiza zaseNingizimu Afrika ezihlala zikhuluma le nkampani ziMiklomelo Yezindiza ehola umklomelo. Ihhovisi eliyinhloko eliseHarrisburg yakho eNingizimu Afrika. Inkampani ekhonza izindawo ze-78 emhlabeni jikelele. Ngasohlangothini olubi akulula ukuthi uhambisane nale ndiza. njengoba zingenye yama-Airlines akhokha kakhulu. Abantu abaningi bazama ukuze uthole umsebenzi nabo. Futhi kufanele sikhumbule ukuthi iNingizimu Afrika ayilula ukuthola i-Visa. Ngakho kufanele uqhubeke njalo njalo ngesonto. Futhi uzama ukuthola ngezikhala zabo zamanje. Izindiza zezindiza zase-Emirates ezineziqondiso ze-Dubai City Company zihlanganisa ukuhlakanipha ukuqala nale nkampani.
Umsebenzi we-19 waseLufthansa
Inkampani yaseLufthansa empeleni akumele iziswe kunoma ubani. Yiqiniso omunye wabadlali abakhulu embonini yezindiza yomhlaba jikelele. Futhi okwamanje le nkampani ine-ton of imisebenzi kusuka kuchwepheshe we-IT kuya kubaphathi ngisho nokuPhathwa kweMisebenzi ephezulu. Umphathi wamakhasimende kanye nomsizi wokuhlanza. Ngalesi nkampani ngokuqinisekile, ungathola cishe noma yimuphi umsebenzi. Uhlangothi olulodwa kuphela olubi kunengxoxo enzima kakhulu edlule. Ngakolunye uhlangothi, ungathola iwebhusayithi yabo yenza kahle. Futhi ungahlola isimo sakho sohlelo lokusebenza kanye nedatha yomuntu siqu. Ngisho nokubhalisa umsebenzi kubonakala etholakalayo kubafunayo umsebenzi. Ngalokhu engqondweni, abaphathi bezindiza ze-Emirates abane-Dubai City Company ngoba nami ngiyatholakala kuwe.
Sinezindawo kuphela kule nkampani ngezansi kuhlu. Ngoba yinkampani yaseYurophu ngakho yingakho kungase kube nzima kakhulu ukuthola iVisa eYurophu. Ngasohlangothini oluhle, le nkampani ibuye icashe eMiddle East naseGibhithe. Namazwe ambalwa ambalwa esingakwazi ngisho nokuwahlola okwamanje. Ngokuqinisekile i-United Arab Emirates, Qatar kanye ne-United States of America.
Imisebenzi ye-20 Singapore Airlines
Singapore Airlines hhayi ukuthi abantu abaningi bebelokhu belapha mayelana nale nkampani. Kodwa le nkampani inokuthuthukiswa kochwepheshe eminyakeni yokugcina ye-20. Umqondo oyinhloko uwukuthi ukusiza abasebenzi ukufeza ukukhula kwabo okugcwele. Kungani ungasebenza nabo oyothandayo kanye nokuthuthukiswa kwalowo nalowo ohlinzeka kabanzi ngale nkampani kuzothuthukisa ochwepheshe bakho ukukuthola. Futhi wonke umuntu ongathanda ukuqala nabo.
Inkampani inikezela ngeziqu zemfundo ephakeme. ngokuvamile, uma ufuna inkampani ozokunikeza uxhaso lwe-visa. Ngokuqinisekile, iSky Airlines izokwenzela lokho. akuzona ezifanele imisebenzi ye-Emirates yezindiza. Kepha kufanelekile ukufaka isicelo njengomuntu ofuna umsebenzi. bheka ngezansi kuwebhusayithi yabo nawe zizinqume ukuthi kufanele yini noma cha.
I-20 Qatar Airways Imisebenzi
Qatar yezindiza zase-Emirates imisebenzi eMiddle East. Amakhulu amathuba wamanje eQatar. Le nkampani yaziwa Ngokuzungeza Iwashi abalifunayo empeleni kubaphathi nabaphathi bezebhizinisis. Ithimba lobuchwepheshe lobuchwepheshe kanye nezinsizakalo zezindiza zabasebenzi, abaphathi bezinkampani zezinkampani kanye nezinhlelo zokusebenza. Ngakwesokunene salenkampani, ungabheka ngisho nokufaka isicelo sakho. Setha izaziso zomsebenzi uma uzoba nesithakazelo kwizithuba ezizayo. Ngoba okwamanje kungenzeka ukuthi ngeke ukwazi ukukunikeza umsebenzi owufunayo njengowesifazane.
Empeleni, yizo kuphela ezinikezela njengekusasa ithuba lokuhlelela amakhono okusebenza kwiwebhusayithi. ngokweqiniso kuzokufanelekela ukuya phambili futhi ufake isicelo okungenani i-50 kuze kufike kwizikhala ze-200. Ngasohlangothini olubi, iyi-Qatar ngakho-ke akulula ukuthi uthole umsebenzi. Okuningi kwe abantu emhlabeni jikelele bafuna ithuba elimangalisayo kuleli zwe. Ngakho kuzodingeka ulwe namaNdiya, amaPakistani, nabanye abameli beMiddle East.
Isiphetho se-Emirates Airlines Careers
Kulesi sigaba, senza isiphetho. Ngakho iningi labantu lifuna ukuthola umsebenzi ku-Airline ekhula ngokushesha. Ngokuvamile imisebenzi eminingi engiyinikeze njengomshayeli kanye nezinto ezisehlabathini. Izindiza izinkampani zizama futhi zanda ngokushesha inethiwekhi. Futhi ikakhulukazi izinkampani e-UAE. I-United States of America neYurophu kuze kube manje nokuthi ikhula ngokushesha kangakanani ezinsizeni zezindiza. Empeleni, ngalolu hlobo lwebhizinisi. Ungahlola imisebenzi etholakalayo emikhakheni eminingi. Kuze kube manje uthola isu namasu okuhlela imisebenzi.
Imisebenzi yesikhungo sezindiza kanye nenethiwekhi. Imisebenzi yokusebenza yobuchwepheshe kanye nomsebenzi ofanayo kakhulu. Ukuphepha esikhumulweni sezindiza nakho kuyinto enkulu. Ngakolunye uhlangothi, sinemisebenzi yekhwalithi. Uhlelo lokugcinwa kwezindiza kanye nensizakalo yezinkampani. Khona-ke imisebenzi yezinkampani nezomnotho nayo kufanelekile ukuthola. Ukucacisa kakhulu imisebenzi yikhasimende igxile kakhulu. Ngakho-ke unjengezisebenzi ozodinga ukunqamula ukulindela kwamakhasimende ku-Airport.
I-Dubai City Inkampani ye-Job Seekers
I-Dubai City Inkampani ilangazelela ukukubona ezihlokweni zethu ezihlukile. Ibhulogi yethu ibanjelwe kakhulu ku-Job Seekers. Kuze kube manje uthola izinkampani ezingcono kakhulu ozisebenzela zona. Sethemba, ufake isicelo kuzo zonke izinkampani esizihlinzekayo. Ngoba siyinkampani yokuthola umsebenzi futhi sifuna umsebenzi ukusiza abanye ekutholeni imisebenzi emangalisayo. Inkampani yethu isekelwe e-Dubai. Yingakho sibeke ama-Emirates. futhi siyaziqhenya kakhulu ngaleli bhizinisi. Ngaphezu kwalokho, siye sasiza ukwakha imikhiqizo eminingana emhlabeni jikelele. Ngakho, yiba omunye Umsebenzi wethu omningi Ufuna umsebenzi emhlabeni wonke. Kuze kube manje sesisize abafunelwa imisebenzi eSaudi Arabia. Kanye ne-Indian-Pakistani njengenombolo yokuqala. IPhilippines kanye Abantu baseNingizimu Afrika kanye nezakhamuzi zase-Iraniya nezaseMelika.
Ngifuna phambili ukukubona futhi!
Inkampani yethu iyaziqhenya kakhulu ngamakhasimende ethu ngamunye. ngaphezulu Abafuna umsebenzi be-50,000 bathola umsebenzi yinkampani yethu. Iqondisiwe umkhakha ngamunye ngakho-ke lokho esikushoyo kulokho. Ingabe ubunjiniyela marketing, Human Resources, ukwelashwa, it, isevisi yamakhasimende nokufundisa. Izinsizakalo esizihlinzekayo ukuthengiswa kwamazwe ngamazwe. noma ngabe unquma ukuthi uluphi uhlobo lomsebenzi othanda ukuwuthola nenkampani yethu. Sifuna ukukunikeza lokho. Ngakho qhubeka uphinde ucwaninga iwebhusayithi yethu. Ngoba sinezinto eziningi ezingase zikusebenzele. Njenge Umsebenzi wokufuna emhlabeni jikelele.